ASMARA - Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa mar labaada mudo 3 bilood gudahooda kula kulmay magaalada Asmara, ee caasimadda Eritrea gudoomiyaha Jabhadda ONLF, Maxamed Cumar Cismaan.
Kulanka waxaa sidoo kale ku wehliyay xoghayaha guud ee ONLF, Cabdiraxmaan Mahdi iyo mas'uuliyiin kale oo katirsan Jabhaddan dagaalka kula jirta Eithiopia.
Wararka ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku casuumay hogaanka sare ee ONLF magaalada Muqdisho, oo ah halkii ay dowladdiisa ka dhoofisay Cabdikariim Qalbi Dhagax 2017, oo ugu gacan gelisay dowladda Itoobiya.
ONLF iyo Villa Somalia wali fahfaahin kama bixin ajandooyinka wadahadalka Asmara ku dhexmaray Farmaajo iyo hogaanka Ururkan oo dhawaan ogolaadey inuu la jaan-qaado isbedelka Itoobiya ka socda, gaar ahaan dowlad degaanka Soomaalida.
Lama oga ujeedooyinka ay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ka damacsan tahay ONLF, oo ah Jabhad aan saldhigyo ku lahayn dalka, balse mudo dagaal kula jirtay dowladda Eithiopia.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin miisaan culus oo diyaarinaya Mooshin ka dhan ah Farmaajo...